म भ्रष्टचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि गर्न दिन्न : मन्जितकुमार यादव [अन्तर्वार्ता] « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
म भ्रष्टचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि गर्न दिन्न : मन्जितकुमार यादव [अन्तर्वार्ता]
जनताको घर—दैलोको सरकार भनेर स्थानीय सरकारलाई चिनिन्छ । नजिककै, रामै्र चिनजानकै जनप्रतिनिहरुले चलाउने सरकार भएकोले जनताले सजिलै आफ्ना आवश्यक्त, माग र समस्या राख्न सक्छन् । संघीयता लागुभएर स्थानीय सरकार आएदेखि गाउँ—गाउँमा विकासको छनक सुरु भएको छ । केही पालिकाहरुले उदाहरणीय काम समेत गरेका छन् ।
भर्खरै सम्पन्न पालिका चुनावबाट जनताले अबको पाँच वर्षका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि चुनेका छन् । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले कस्ता योजनालाई महत्व दिएर काम अगाडि बढाउँछन् भन्नेमा जनताको ध्यान तानिएको छ । कतिपय पालिकाहरुमा राम्रा कामहरुको सुरुवात भैसकेका छन् भने केही पालिकामा जनप्रतिनिधिहरु अलमलमा परेजस्तो देखिएको छ ।
मधेश प्रदेशको रुपन्देही जिल्ला स्थित ओमसतिया गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेबाट मन्जितकुमार यादव निर्वाचित भएका छन् । उनले पालिकाको विकासमा जनसहभागितालाई महत्व दिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अब पालिकाको विकासमा कस्ता कामलाई बढी महत्व दिने र पालिकाको समग्र समसामयिक विषयमा यादवसँग अनलाइनपानाले गरेको कुराकानी :
निर्वाचन जित्न के–के गर्नुभयो ?
मैले यहाँका जनताको चाहाना अनुसार उम्मेदवारी दिएको थिएँ । म नै ओमसतियाको अध्यक्षमा उम्मेदवार हुन पर्छ भन्ने जनताको जोडदार माग थियो । हाम्रो परिवार पहिलेदेखि गाउँको सेवामा सकृय हुँदै आएको छ । त्यसकारणले पनि मलाई यहाँका दाजुभाइ दिदी बहिनीले साथ दिनुभएको हो । निर्वाचन जित्न मैले धेरै मिहेनत गर्न परेन । सही र विकास गर्न सक्ने उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिए पुग्छ, अरु केही गर्न पर्दैन । जनता सचेत छन् ।
अब गाउँपालिकामा कस्ता योजनाहरुलाई प्राथामिकता दिनुहुन्छ ?
हामी गाउँपालिकाको विकास गर्दा सबैभन्दा प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई दिनेछौं । शिक्षामा व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन जरुरी छ । शिक्षा राम्रो नभएको ठाउँमा अन्य क्षेत्रको विकास गर्न पनि असहज हुन्छ । त्यसो हुनाले हामी विद्यालयहरुमा प्राविधिक शिक्षा, शिक्षकको कमी भएको विद्यालयमा स्थानीय स्रोतबाट शिक्षकको व्यवस्था गर्ने, विद्यालयहरुको भौतिक अवस्था व्यवस्थित बनाउने लगायतका कामहरु पहिला गर्ने छौं । त्यसैगरी स्वास्थ्यलाई पनि हामीले प्राथामिकतामा राखेका छौं । गाउँपालिकाको प्रत्यक वडामा स्वास्थ्य चौकीहरुलाई व्यवस्थित बनाउने छौं । स्वास्थ्य संस्था नभएका ठाउँमा नयाँ खोल्ने छौं । पालिकामा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नेछौं ।
विकास निरन्तर भइरहने प्रक्रिया हो । कुन क्षेत्रको विकास अगाडि, छिटै गर्नुपर्छ र जनतालाई तत्काल कुन कुराको आवश्यक्ता छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ ।
विकास निरन्तर भइरहने प्रक्रिया हो । कुन क्षेत्रको विकास अगाडि, छिटै गर्नुपर्छ र जनतालाई तत्काल कुन कुराको आवश्यक्ता छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ । त्यस हिसाबमा हामी काम गर्ने छौं । अहिले हाम्रो पालिकामा बाटो ग्रेबल गरिएको छ । अब हामी त्यसलाई स्तरोन्नती गरेर कालोपत्रे गर्ने छौं । यहाँ नाली बनाउन पनि पर्नेछ । धेरै पानी पर्दा नाली नभएकोले बाढी आउने समस्याबाट जनता आजित भएका छन् । त्यसो हुनाले अहिले गरिहाल्न पर्ने काम नै नाली बनाउने हो । बाटोभन्दा पनि पहिला नाली बनाउने छौं । त्यसो गर्दा डुवान कम हुन्छ ।
हाम्रोमा पालिका भवन अझै बनेको छैन । पालिका भवन बनाउनका लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । अब छिटै काम सुरु गर्ने छौं ।
त्यसैगरी हाम्रो पालिकामा राम्रो कृषि उत्पादन हुन्छ । यहाँका केही वडाहरुमा सिचाइँको अभाव छ । त्यहाँको लागि हामी सिचाइँ गर्न नहर र कुलोको योजना ल्याउने छौँ । मलको समस्या अहिले जटिल बनेको छ । यसमा पनि हामी किसानलाई छिटै मल र बीउ उपलब्ध गराउने प्रयत्न गर्ने छौं । कृषि तथा पशुपालनमा अनुदान लगायतका राम्रा योजनाहरु ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं ।
ओमसतियामा बाढी र ढुवानले कति सताउँछ ? त्यसका लागि पूर्वतयारी के छ ?
हाम्रो ओमसतिया गाउँपालिकामा जम्मा ६ वटा वडा छ । त्यस मध्यमा डुवानमा पर्ने वडामा १ र २ पर्छ । त्यहाँको सधैँ डुवान हुने समस्या समाधान गर्न हामी हाल सर्वे गरिरहेका छौं । केही वडाका केही स्थानमा कटानको पनि डर भएको छ । यी समस्याहरुको लागि हामी पहल गर्ने छौं । पालिकाको स्रोत साधनले भ्याएसम्म समाधान गर्न कोसिस गर्ने छौं । यदी ठूलै समस्या आइपर्दा प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग हामी सहयोगको लागि अपिल गर्ने छौं । खासगरि यहाँ रोहेणी खोलामा आउने बाढीबाट हामी पीडित छौं ।
प्रदेश र संघ सरकारसँग कसरी समोन्वय गरेर काम गर्नुहुन्छ ?
गाउँपालिको स्रोत र साधनले मात्रै विकास गर्न सम्भब छैन् । त्यसो हुनाले हामीले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर राम्रा योजनाहरु यहाँ ल्याउन पर्ने छ । हामी पालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरु संघ र प्रदेशबाट यहाँको जनताको माग अनुसारको योजना ल्याउन भरपुर कोशिस गर्ने छौं । गर्न सुरु गरेका छौं ।
विकास गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधिले जनतासँग छलफल गरेनन् भन्ने छ । विकासमा जनसहभागिता गराउनका लागि के गर्नु हुन्छ ?
टोल—टोलमा गएर छलफल गरेर आवश्यक्तहरु मध्यको पनि महत्वपूर्ण आवश्यक्तालाई प्राथामिकतामा राखेर हामी काम अगाडि बढाउने छौं । जनताले हामीलाई काम गर्न यहाँ पठाएका हुन् । उहाँहरुको चाहना र भावना अनुसार नै पाँच वर्ष काम गर्ने हामीले प्रतिबद्धता जनाएका छौं । अब ओमसतिया गाउँपालिको प्रत्येक काममा जनताको सहभागिता हुने छन् । स्थानीय तहको गत कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरुले यस्ता काम गरे होलान् । तर यो कार्यकालमा हामी जनतालाई सर्वपरि ठानेर पालिकाको विकास गर्नेछौं ।
पालिकाहरुमा भ्रष्टचार मौलायो भन्ने छ । भ्रष्टचार हुन नदिन कस्ता योजना छन् ?
केही पालिकाहरुमा भ्रष्टचार भएको होला । यसको छानबिन हुन जरुरी छ । भ्रष्टचारीले सजाय पाउन पर्छ । सबै जनप्रतिनिधि सही नै हुन्छन् भन्ने छैन् । त्यसो हुनाले जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि चन्दा कुनै प्रलोभन र पैसा, मास, रक्सिमा नविकी सहीलाई चुन्नु पर्छ । जहाँसम्म हाम्रो पालिकाको कुरा छ । म आफु पनि भ्रष्टचार गर्दिनँ । अरुलाई पनि भ्रष्टचार गर्न दिन्न ।
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २९, २०७९ आईतबार ४ : ५५ बजे